Imigomo nemibandela - UK 2021 ✅
Home » Imigomo nemibandela
Uyemukelwa eCasinoble UK
Le migomo nemibandela ichaza imithetho nezimiso zokusetshenziswa kwewebhusayithi yeCasinoble UK.
Ngokungena kule webhusayithi sicabanga ukuthi uyayamukela le migomo nemibandela ngokugcwele. Ungaqhubeki nokusebenzisa iwebhusayithi yeCasinoble UK uma ungayamukeli yonke imigomo nemibandela eshiwo kuleli khasi.
Amagama alandelayo asebenza kule Migomo Nemibandela, Isitatimende Sobumfihlo kanye Nesaziso Sokuzikhipha Emthwalweni kanye nanoma yisiphi noma yiziphi Izivumelwano: “Iklayenti”, “Wena” kanye no “Wakho” kubhekiswa kuwe, umuntu ongena kule webhusayithi futhi owamukela imigomo nemibandela yeNkampani. “Inkampani”, “Ngokwethu”, “Thina”, “Yethu” kanye “Nathi”, kubhekisa eNkampanini yethu. “Iphathi”, “Amaphathi”, noma “Thina”, kubhekiswa kuzo zombili iKlayenti nakithi uqobo, noma kuKlayenti
noma thina. Yonke imigomo ibhekisa ekunikezelweni, ekwamukelweni nasekucatshangelweni kwenkokhelo edingekayo ukwenza inqubo yosizo lwethu kwiKlayenti ngendlela efanelekile, kungaba ngemihlangano esemthethweni yesikhathi esinqunyiwe, noma ezinye izindlela, ngenhloso ebonakalayo yokuhlangana Izidingo zamakhasimende maqondana nokuhlinzekwa kwemisebenzi / imikhiqizo eshiwo yiNkampani, ngokuya nangokuya ngomthetho okhona we. Noma ikuphi ukusetshenziswa kwamatemu angenhla noma amanye amagama asebunyeni, ubuningi,
Usonhlamvukazi kanye / noma yena, zithathwa njengezishintshana ngakho-ke zibhekisela kokufanayo.
Sisebenzisa ukusetshenziswa kwamakhukhi. Ngokusebenzisa iwebhusayithi kaCasinoble UK uyavuma ukusetshenziswa kwamakhukhi ngokuya ngenqubomgomo yobumfihlo yeCasinoble UK.Amawebhusayithi amaningi anamuhla asebenzisanayo asebenzisa amakhukhi ukusivumela ukuthi sikwazi ukuthola imininingwane yomsebenzisi ekuvakasheni ngakunye.
Amakhukhi asetshenziswa kwezinye izindawo zesiza sethu ukunika amandla ukusebenza kwale ndawo nokusebenziseka kalula kwalabo bantu abavakashelayo. Abanye esibambisene nabo / ozakwethu bokukhangisa bangasebenzisa amakhukhi
Ngaphandle kokuthi kushiwo ngenye indlela, iCasinoble UK kanye / noma abanikazi bamalayisense bangabanikazi bamalungelo obunikazi bempahla yonke into ekuCasinoble UK. Wonke amalungelo empahla yokusungula agodliwe. Ungabuka futhi / noma uphrinte amakhasi kusuka ku-https: //casinoble.org ukuze uwasebenzisele wena uqobo kuncike emikhawulweni ebekwe kule migomo nemibandela.
Shicilela kabusha okuqukethwe kusuka ku-https: //casinoble.org
Thengisa, qasha noma usebenzise ilayisense elincane kusuka ku-https: //casinoble.org
Khiqiza kabusha, uphindaphinde noma ukopishe izinto ezivela ku-https: //casinoble.org
Sabalalisa kabusha okuqukethwe kusuka kuCasinoble UK (ngaphandle kokuthi okuqukethwe kwenzelwe ukusabalalisa kabusha).
Izinhlangano ezilandelayo zingaxhumanisa neWebhusayithi yethu ngaphandle kwemvume ebhalwe phansi:
Abasabalalisi bezincwadi eziku-inthanethi lapho besifaka ohlwini lwemibhalo bangaxhumanisa neWebhusayithi yethu ngendlela efanayo naleyo abayixhumanisa ngayo nezingosi zamanye amabhizinisi asohlwini; futhi
Amabhizinisi Aqinisekisiwe Ese-Systemwide ngaphandle kokucela izinhlangano ezingenzi nzuzo, izinxanxathela zezitolo ezisiza abampofu, namaqembu okusiza abaxhasi okungenzeka angaxhumanisi neWebhusayithi yethu.
Lezi zinhlangano zingaxhumanisa nekhasi lethu lasekhaya, ekushicilelweni noma kolunye ulwazi lweWebhusayithi inqobo nje uma isixhumanisi:
(a) akudukisi nganoma iyiphi indlela; (b) akusho ngamanga ukuxhaswa, ukugunyazwa noma
ukuvunywa kweqembu elixhumayo nemikhiqizo yalo noma amasevisi; futhi (c) ingena ngaphakathi komongo wesiza seqembu elixhumayo.
Singacabanga futhi samukele ngokubona kwethu ezinye izicelo zesixhumanisi ezivela kulezi zinhlobo zezinhlangano ezilandelayo:
imithombo yolwazi eyaziwa kakhulu yomthengi kanye / noma yebhizinisi efana neChambers of Commerce, American
I-Automobile Association, i-AARP ne-Consumers Union;
dot.com amasayithi omphakathi;
izinhlangano noma amanye amaqembu amele izinhlangano ezisiza umphakathi, kufaka phakathi amasayithi wokupha ngesisa,
abasabalalisi beziqondisi eziku-inthanethi;
ama-accounting, umthetho kanye namafemu wokubonisana amaklayenti awo angamabhizinisi; futhi
izikhungo zemfundo kanye nezinhlangano zezohwebo.
Sizovuma izicelo zokuxhumanisa ezivela kulezi zinhlangano uma sinquma ukuthi:
(a) isixhumanisi besingabonakali
ngokungathandeki kithina noma kumabhizinisi ethu aqinisekisiwe (ngokwesibonelo, izinhlangano zabasebenzi noma ezinye izinhlangano ezimele izinhlobo zebhizinisi ezisolwayo, njengamathuba okusebenzela ekhaya, ngeke zivunyelwe ukuxhumanisa);
(b) inhlangano ayinalo irekhodi elingagculisi nathi; (c) inzuzo kithi ngokubonakala okuhambisana nesixhumanisi idlula ngokungabi bikho; futhi (d) lapho isixhumanisi singumongo wolwazi olujwayelekile lwezinsizakusebenza noma sihambisana nokunye okuqukethwe komhleli ephephandabeni noma komkhiqizo ofanayo oqhubeka nomsebenzi wenhlangano.
(a) akudukisi nganoma iyiphi indlela;
(b) akusho ngamanga ukuxhaswa, ukugunyazwa noma ukuvunywa kweqembu elixhumanisayo kanye nemikhiqizo noma izinsizakalo; futhi
(c) ingena ngaphakathi komongo wesiza seqembu elixhumayo.
Uma uphakathi kwezinhlangano ezibalulwe esigabeni 2 ngenhla futhi unentshisekelo yokuxhumanisa newebhusayithi yethu, kufanele usazise ngokuthumela i-imeyili ku- [email protected]
Sicela ufake igama lakho, igama lenhlangano yakho, imininingwane yokuxhumana (njengenombolo yocingo kanye / noma ikheli le-imeyili) kanye ne-URL yesayithi lakho, uhlu lwawo wonke ama-URL ohlose ukuwaxhumanisa neWebhusayithi yethu, nohlu lwama-URL esizeni sethu ongathanda ukusixhumanisa nalo. Vumela impendulo amasonto ama-2-3.
Izinhlangano ezivunyelwe zingase zixhumane ne-Web site yethu ngokulandelayo:
Ngokusebenzisa igama lethu lenkampani; noma
Ngokusebenzisa i-locator resource locator (ikheli leWebhu) elixhunywe ku; noma
Ngokusebenzisa noma iyiphi enye incazelo yeWebhusayithi yethu noma okokusebenza okuxhunyaniswe nakho kunengqondo ngaphakathi komongo nefomethi yokuqukethwe kusayithi leqembu elixhumanisayo.
Akukho ukusetshenziswa kwelogo kaCasinoble UK noma omunye umsebenzi wobuciko ozovunyelwa ukuxhumanisa engekho esivumelwaneni selayisense yophawu lokuhweba.
Ngaphandle kokuvunywa kwangaphambili futhi uveze imvume ebhaliwe, awunakudala amafreyimu azungeze amakhasi ethu eWebhu noma usebenzise amanye amasu aguqula nganoma iyiphi indlela ukwethula okubonakalayo noma ukubukeka kweWebhusayithi yethu.
Sigcina ilungelo nganoma yisiphi isikhathi nangokuzithandela kwalo ukucela ukuthi ususe zonke izixhumanisi noma yisiphi isixhumanisi esithile esiya kwiWebhusayithi yethu. Uyavuma ukususa ngokushesha zonke izixhumanisi eziya kwiWebhusayithi yethu lapho uceliwe. Futhi sinelungelo lokuchibiyela le migomo nemibandela kanye nenqubomgomo yayo yokuxhumanisa nganoma yisiphi isikhathi. Ngokuqhubeka nokuxhumanisa neWebhusayithi yethu, uyavuma ukubophezeleka futhi uthobele le migomo nemibandela exhumanisayo.
Uma uthola noma yikuphi ukuxhumana kwiWebhusayithi yethu noma kunoma iyiphi iwebhusayithi exhunyanisiwe engathandeki nganoma yisiphi isizathu, ungaxhumana nathi ngalokhu. Sizobheka izicelo zokususa izixhumanisi kepha ngeke sibe nesibopho sokwenza kanjalo noma ukuphendula ngqo kuwe.
Yize sizama ukuqinisekisa ukuthi ulwazi olukule webhusayithi luyiqiniso, asiqinisekisi ukuthi luphelele noma lunembile; futhi asizibophezeli ekuqinisekiseni ukuthi iwebhusayithi ihlala itholakala noma ukuthi okuqukethwe okukuwebhusayithi kugcinwa kusesikhathini.
Ngeke sibe nesibopho noma isikweletu nganoma yikuphi okuqukethwe okuvela kuwebhusayithi yakho. Uyavuma ukusibopha futhi usivikele kuzo zonke izimangalo ezivela noma ezincike kwiwebhusayithi yakho. Asikho isixhumanisi (izixhumanisi) esingavela kunoma yiliphi ikhasi kwiWebhusayithi yakho noma ngaphakathi kwanoma imuphi umongo oqukethe okuqukethwe noma okokusebenza okungachazwa ngokuthi kuyinhlamba, kuyichilo noma kuyisigebengu, noma kwephula umthetho, kungenjalo kwephula, noma kukhuthaza ukwephulwa komthetho noma
okunye ukwephulwa, kwanoma imaphi amalungelo avela eceleni.
Ngokwezinga elivunyelwe umthetho osebenzayo, asizibandakanyi zonke izethulo, amawaranti nemibandela ephathelene newebhusayithi yethu kanye nokusetshenziswa kwale webhusayithi (kufaka phakathi, ngaphandle komkhawulo, noma iziphi iziqinisekiso ezishiwo ngumthetho maqondana nekhwalithi egculisayo, ukufaneleka kwenjongo kanye / noma ukusetshenziswa kokunakekelwa okufanele nekhono). Akukho lutho kulesi sitatimende esizokhipha:
nciphisa noma ukhiphele eceleni isibopho sethu noma sakho sokufa noma sokulimala komuntu okubangelwa ubudedengu;
nciphisa noma ukhiphele eceleni isibopho sethu noma sakho sokukhwabanisa noma ukumelela kabi inkohliso;
nciphisa noma yiziphi izikweletu zethu noma izikweletu zakho nganoma iyiphi indlela ezingavunyelwe ngaphansi komthetho osebenzayo; noma
khipha noma yiziphi izikweletu zethu noma izikweletu zakho ezingakhishwa ngaphandle komthetho osebenzayo.
Imikhawulo kanye nokukhishwa kwesikweletu okushiwo kulesi Sigaba nakwezinye izindawo kulo mshwana wokuzikhipha emthwalweni:
(a) zingaphansi kwesigaba esandulele; futhi
(b) iphathe zonke izikweletu ezivela ngaphansi kwesitatimende noma
maqondana nodaba lwalo msulwa wokuzikhipha emthwalweni, kufaka phakathi izikweletu ezivela enkontilekeni, ku-tort
(kufaka phakathi ubudedengu) nokwephula umsebenzi osemthethweni.
Uma nje iwebhusayithi kanye nemininingwane kanye nezinsiza ezikule webhusayithi zinikezwa mahhala, ngeke sibophezeleke kunoma yikuphi ukulahleka noma ukulimala kwanoma iluphi uhlobo.
Uma unemibuzo mayelana nanoma yimiphi imigomo yethu, sicela uxhumane nathi.